Warqad Furan Oo Ku Wasiirka Cusub Ee Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka JSL! | Gabiley News
Warqad Furan Oo Ku Wasiirka Cusub Ee Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka JSL!
14kii Disember 2017ka ayuu Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi uu Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka u magacaabay Md Cabdillaahi Abokor Cismaan oo hore u noqday Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Waxa aan Eebbe ka baryayaa in uu xilka u fududeeyo masuulkan cusub. Maadaama oo waxa lagu kabi karo sarkaalkani tahay talo, tusaale iyo tilmaan waxa aan warqad furan hawada u marin doonaa Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka. Qormadu waxa ay u qaybsanaan doontaa saddex dhudood.
1.Xaaladda Wasaaraddii Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka
Mudane Wasiir, waxa xidhan gegooyinka Boorama, Ceerigaabo, Burco iyo Laascaanood (Weliba gegada Sool waxoogaa qaad ah oo ka soo dega mooyaane, ma ogi shaqo kale oo ka socota). Waynu ka warqabnaa in dawladda Imaaraadka lagu wareejiyay Garoonkii Berbera, sidaas awgeed markan kobtan la eego waxa aad madax u noqon doontaa Garoonka Caalamiga ah ee Cigaal iyo Xafiisyadii Wasaaradda Duulista Hawada.
Iyada oo weliba la hadal hayay in Madaarka Cigaal lagu wareejiyo shirkado shisheeye ah, marka laga hadlo Wasaaraddii Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka, waxa aad la wareegi doontaa xarun uu si gaar ah qof u nidaamsaday. Shirkado badan oo meesha jooga waxa lagu leeyahay saami-hoosaad. Ma arki doontid wax lacag ah oo meesha dhex maraysa, keliya waraaqo-maaliyadeed (jeegag) oo qaydhinka lagu kala goosto ayaa is-weydaaranaya.
Wax badan oo dalka iyo dadka waxtar u yeelan ahaa ayaa ku dhaca jeebadaha siyaasiyiin iyo ganacasato wada saxeexday heshiisyo aan ummadda loo bandhigin. Tuumbooyin “jiif oo jaq” ah ayaa rakiban, intii aad xabsiga liinta ku cabbaysay ayaa malabkaas la dhuuqayay. Waxa lagaa filayaa sidii hantidaas ummadda dib loogu celin lahaa xukuumadda oo waddanka uga masuul ah dhulka, dhaqaalaha, nabadgelyada iyo guud ahaan hagidda muwaaddiniinta.
Laba wasiir oo hore (Cumar Maxamed Faarax iyo Cismaan Cabdillaahi Saxardiid) waxa lagu beddelay min saddex bilood, waxaana la qoonsaday markii ay saluugeen hannaanka shaqada. Walaw ay hayeen mansab wasiirnimo, waxa lagu wargeliyay in ay ka amar qaataan hawl-wadeenno meesha lagu carbiyay.
Qolka mudanka (VIP), Adeegga soo-dejinta iyo rarka diyaaradaha, nabadgelyada, gelista iyo soo-bixista gawaadhida, shidaalka diyaaradaha iyo meelo badan oo kale waxa la siiyay madax bannaani. Goobo badan oo hoos iman lahaa xukunkaagu waa kuwo muddo ka baxay faraha xukuumadda. Haddii aad u hoggaansanto sii-fulinta xeeladihii hore looga hirgeliyay wasaaradda, waxa ay weydiin culusi dul saarnaan doontaa mansabka wasiirnimo ee dhawaan laguu magacaabay.
Badiba shaqaalaha duulista hawada iyo madaarradu waxa ay hoos tagaan shirkado gooni ah, sidaas awgeed waxa dhif noqon doona inaad aragto cid aad u taliso. Keliya waxa toos kuu hoos iman doona shaqaalaha ku qoran Waaxda Duulista Hawada (Wasaaraddii Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka). Waan hubaa in aad madax u noqon doontid xarun dheelli ah dhanka madax-qaybeedyada ama agaasime-waaxeedyada, waxaana kula gudboon in aad jidka sinnaanta ku soo dabbaasho. Adeegayaal la koolkooliyay oo daba hallayn hooyadood dabada uga nuuga ayaad madax u noqon doontaa. Haddii hore loo odhan jiray “Shaagle laga baqay” waxa aan dhawrayaa sida aad gacan buuxda ugu dhigi doonto hagista majaraha laguu igmay.
Iyada oo hore loo kordhiyay dhulka madaarka Cigaal (Hargeysa), waxa ku soo gaadhi doona cabashada dadka leh dhulka gegada la deriska ah oo jagooyinkooda loo xayiray in uu madaarku ku fido. Waxa qurxoon inaad dadkaa si quman ula xaajooto. Qaybo ka mid ah dhulkii loola wareegay in Madaarka lagu daro waxa gacanta loo geliyay oo laga kireeyay, la siiyay ama bilaash ugu shaqaysta cid gaar ah. Haddii dan qaran awgeed dhulkaasi loo qarameeyay, sidee ayaa muwaaddiniin kale loogu wareejiyaa?
Aniga oo waayadii aad ahayd Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha (2012ka illaa 2014ka) bartay in aad tahay nin go’aan iyo ku-dhac leh, waxa aan filayaa in aad xogahan ku darsato ogaalkaaga iyo waxqabadka aad si uun wax uga beddeli doonto muddada aad xilkan hayso insha Allah.
Copyright © 2020 Gabiley News ®All rights reserved.